ट्याव्लेट ट्रेन्ड | मेरो कलम
– सिन्धुलीका प्रमोद पौडेल एप्पलको ट्याव्लेट पिसी चलाउछन् । उनलाई ट्याव्लेट पिसी शौख नभई आवश्यकता भईसक्यो । व्यवसायीक व्यक्ति भएकाले धेरै काममा व्यस्त भईरहने पौडेलको हातमा ट्याव्लेट नाचिरहेको हुन्छ । फोन,ईमेल,ईन्टरनेट,फोटो खिच्न, एवं दैनिक कारोवारको विवरण ट्याव्लेटवाट गर्नु दैनिकी नै हो । त्यतिमात्र हैन कामवाट फुर्सद हुनासाथ गेम खेल्न ,फिल्म हेर्न,गित सगिंत सुन्न,ईन्टरनेट चलाउन पनी पौडेल ट्याव्लेटनै चलाउछन् । पौडेल भन्छन् केहि समय अघि मात्रै निश्चित स्थानमा वसेर कम्प्युटरमा काम गर्नुपथ्र्यो । त्यसको लागी निश्चित समय छुट्टाउनु पथ्र्यौ , तर अहिल्य जहाँ जुनसुकै ठाउँमा पनी अपडेट भईरहन सजिलो भएको छ । काठमाण्डौ ठमेलको एक कार्गो व्यवसायमा कार्यरत ज्ञानेन्द्र विक्रम वानिँयापनी ट्याव्लेट पिसी खरिद गर्ने सोचमा छन् । उनलाई भने सस्तो,राम्रो ट्याव्लेट चाहिएको छ । उनि भन्छन् , साधारण कमाई भएकाले सस्तो ट्याव्लेटको खोजिमा छु । प्रयोग गरिरहेकाको सुझाव र साथीभाईको सल्लाहपछि ट्याव्लेट किन्ने मनसायमा छन् उनि । वानियाँले खोजेजस्तै केहि हजारदेखी लाखौ रुपैयाँसम्मका ट्याव्लेट पिसी नेपाली बजारमा उपलव्ध छ ।
एक सयम थियो कम्प्युटर डेक्सटपमा वसेर काम गर्नुपथ्र्यो,त्यसको लागी निश्चित समय स्थानमा हुन आवश्यक थियो त्यसपछि ल्यापटपले डेक्सटप कम्प्युटरलाई पाखा लगाईरहेको छ , चुस्तदुरुस्त भनिएको ल्यापटपपनी अव वोझिलो हुदै गईरहेको छ । वोकेरै हिड्न पाईने, जस्तोसुकै जहाँपनी काम गर्न मिल्ने भनिएको ल्यापटप पनी अव झन्झटिलो वन्दै गएको छ,त्यसको कारण हो नेपालमा ट्याव्लेटले वजार जमाउदैछ । नेपाली वजारमा स्मार्ट फोनको मुल्यमा नै ट्याव्लेट पाईन थालेको छ । दर्जनभन्दा वढी ट्याव्लेट नेपाली वजारमा भित्रिसकेका छन् । भित्रिने क्रम पनी वढ्दो छ , व्राण्डेडदेखी न्वारननै (नामै नभएका) नगरिएका ट्यापलेट पिसी नेपाली बजारमा आईरहेका छन् । दिन दुईगुणा रात चैगुणाको हिसावले ट्याव्लेट प्रयोगकर्ताको सख्या पनी वढ्दैछ । नेपालमा ६ हजारको हाराहारीदेखी लाखौ रुपैया सम्मको ट्याव्लेट पाईन्छ । धनिमनि,मध्यम र निम्म वर्गको लागी , त्यस्तै विद्यार्थी,व्यवसायी,कार्यालयको लागी जस्ता नारा वोकेर धेरै ट्याव्लेट वजारमा भित्रिएका छन् । मोवाईलकै मुल्यमा आउने र सोखको हिसावले पनी ट्याव्लेट खरिद गर्ने धेरै पाईन्छ भने कम्प्युटर र ल्यापटपको काम ट्याव्लेटवाटै गर्न सकिने भएपछि पनी यसको खरिद गर्नेको जमात ठुलो छ । दर्जनौ ट्याव्लेटले विक्रि वितरण गरिरहेका छन्, वुकिङ गर्ने र वितरण गर्न वाकि पनी धेरै छन् । नेपाली बजारमा विक्रि भईरहेको केहि ट्याव्लेटहरु यस प्रकार छन् ।
युवा प्लस ट्याव्लेट ।
नेपाली वजारमा पाईने सस्तो ट्याव्लेट अन्र्तगत नै पर्छ युवा प्लस । थाईल्याण्डमा वनेको यो ट्याव्लेटको मुल्य सात हजार रुपैयाँ रहेको छ । न्युन एवं मध्यम आर्थिक अवस्था भएका उपभोक्ताको रुचीलाई मध्यनजर गर्दै नेपाल डिष्ट्रव्युसन आईएनसीले भित्राएको जनाएको छ । एक वर्षको वारेण्टी रहेको यो ट्याव्लेटमा ईन्टरनेट वाईफाई, जिपिआरएस, थ्रिजी, मोवाईल कल, गेमिङ, क्यामोरा,म्युजिक,भिडियो लगायत सुविधा रहेको कम्पनीको भनाई छ ।
अवतार ट्याव्लेट ।
चिनमा उत्पादित यो ट्याव्लेटको मुल्य २३ हजार रुपैयाँ रहेको छ । डेक्सटप एवं ल्यापटपवाट गरिने कामको ८० प्रतिशत काम यो ट्याव्लेटवाट गर्न सकिने विक्रेता कम्पनी जिल ईन्टरप्राईजेजको दावी छ । ईन्टरनेट,भिडियो,अडियो,फोन,क्यामारा लगायत अन्य सुविधाहरुका साथ पाचँ घण्टासम्म मुभि हेर्न सकिने व्याट्री क्षमता रहेको कम्पनीले जनाएका छ । त्यस्तै कनै पनी फम्र्याटको हाई डेभिनेशन थ्रिडी मुभी एवं अडियो समेत प्ले गर्न सकिने र एडोव अफिसको प्रोग्राम एड गरेर समेत चलाउन सकिन्छ कम्पनीले जनाएको छ । यो ट्याव्लेट पिसीमा एक्सटरनल हार्ड डिस्कको प्रयोगका साथै केवल जोडेर ५२ ईन्च सम्मको टेलिभिजनमा भिडियो हेर्न सकिने कम्पनीले वताएको छ ।
सिमट्रोनिक्स टी ट्याव्लेट ।
एक्पोलर एसियाले नेपाली बजारमा दुई थरिका ट्याव्लेट सिमट्रोनिक्स टी ७०० र टी ९०१ ल्याएको छ । टी ७०० को मुल्य १२ हजार र टी ७०१ को मुल्य १६ हजार रुपैयाँ पर्ने कम्पनीले जनाएको छ । ७ ईन्चको मल्टिटच भएको टी ७०१ मा एन्ड्रोईडको ओएस प्रयोग छ भने ५१२ एमबी ¥याम प्रोसेसर रहेको कम्पनीले जनाएको छ । अफिस प्याकेजका फाईलहरु पढ्न सकिनुका साथै ईन्टरनेट थ्रीजी वाईफाई,अडियो,भिडियो लगायतको सुविधा रहेको कम्पनीको भनाई छ ।
पारामाउन्डको ट्याव्लेट पिसी ।
मारामाउन्ट इलेक्ट्रोनिक्सले भर्खरै नेपाली वजारमा ४ प्रकारका ट्याव्लेट ल्याएको छ । एन्ड्रोइड ४ दशमलव ० दशमलव ३ भर्सन अपरेटिङ सिस्टम रहेको यो ट्यावलेट साढे आठ हजारदेखी अठार हजारसम्मका रहेको कम्पनीले जनाएको छ । ७ देखी १० दशमलव १ इन्च सम्मको यी ट्याव्लेटको चारदेखी सोह्र गिगावाईटसम्मको इन्टरनल मेमोरी र १ जिविसम्मको ¥याम रहेको कम्पनीले जनाएको छ । साथै स्क्रिन टचमा सेन्सेटिभ,स्मुथ र राम्रो व्याट्री क्षमताको र माग पश्चात तत्काल उपलव्ध गराउने सुविधा रहेको कम्पनीको दावी छ ।
इङकटेकको एसआई सेभेन ट्याव्लेट ।
इङकटेक ईण्डष्ट्रिजले ६ हजार २ सय रुपैयाँमा पाईने सात ईन्चको एसआई सेभेन ट्याव्लेट वजारमा ल्याएको छ । एन्ड्रोईड २ दशमलव ३ अपरेटिङ सिस्टम र २५६ डिडि आरटु ¥याम भएको यो ट्याव्लेटमा एक गिगाहर्जको प्रोसेसर रहेको छ । त्यस्तै चार जिबीको ईन्टरनल मेमोरी साथै ३२ जिवीसम्म एक्सटरनल मेमोरी सपोर्ट गर्ने यसमा टच स्क्रिन युएसवी पोर्ट,वाईफाई,थ्रिजी अडियो,भिडियो लगाएको सुविधा रहेको छ । एसआई अन्र्तगतका दुई ट्याव्लेट उपलव्ध रहेको कम्पनीले जनाएको छ ।
नोभ ०७ ट्याव्लेट ।
मोटिभ ईन्जिनियरिङ प्रालीले नेपाली वजारमा एन्ड्रोईड नोभ ०७ ट्याव्लेट पिसी भित्राएको छ । सात ईन्चको यो ट्याव्लेट नौ हजार नौ सयदेखी तेह्र हजार पाचँ सयसम्ममा उपलव्ध रहेको कम्पनीले जनाएको छ । यो ट्याव्लेटमा इन्जेनिक जेजेड ४७७० प्रोसेसर प्रयोग गरिएको छ भने दुई मेगापिक्सलको थ्रिडी क्यामरा,वाईफाई,युएसवी पोर्ट,माइक्रो स्लट साथै अडियो भिडियो रहेको कम्पनीले जनाएको छ ।
एईडिएस ट्याव्लेट ।
एईडिस कम्पनीले नेपाली वजारमा ४ प्रकारको एन्ड्रोईड ट्याव्लेट वजारमा ल्याएको छ । छ हजार चार सयदेखी तिस हजार रुपैयाँ सम्मको यो ट्याव्लेटमा २ दशमलव ३ प्रोसेसर, ५१२ एमवी डिडिआर टु ¥याम, ८ जिविसम्मको ईन्टरनल मेमोरी साथै ३२ जिविसम्म एक्सटरनल मेमोरी सपोर्ट गर्ने कम्पनीले जनाएको छ । सात ईन्चको टचस्त्रिन यो ट्याव्लेट पिसीमा थ्रिजी,वाईफाई लगायत अफिल प्याकेजका वर्ड,एक्सल पढ्न सकिने, ईन्टरनेट,साथै १ दशमलव ३ मेगापिक्सलको क्यामरा,आठ घण्टासम्मको व्याट्री क्षमता रहेको कम्पनीले जनाएको छ ।
ओएसम ट्याव्लेट ।
सि लिंक मोवाईल केयर होमले यो ट्याव्लेट पिसी नेपाली बजारमा ल्याएको छ । ६ हजार ९ सय ९९ पर्ने यो ट्याव्लेटमा एन्ड्रोइडको ३ दशमलव ३ अपरेडिङ सिस्टम रहेको छ । फुल एचडीको सुविधायुक्त यो ट्यावलेट पिसीमा थ्रिजी,वाईफाई,भोईस सर्च म्याप,ग्राभिटी सेन्टर र एडिएसएल लगायतको सुविधा रहेको कम्पनीको भनाई छ ।
भ्यू सोनिक ट्याव्लेट ।
भ्यु सोनिकले नेपाली बजारमा यो ट्याव्लेट सार्वजनिक गरेको छ । सात ईन्चको पर्ल वाईट ट्याव्लेटमा एन्ड्रोईड २ दशमलव ३ अपरेटिङ सिस्टमका साथै एक गिगाहर्जको प्रोसेसर र फुल एचडी पी भिडियो रिजोलुसन रहेको छ । यसमा वाईफाईका साथै म्युजिक भिडियो र गेमहरु डाउनलोड गर्न सकिने व्यवस्था रहेको कम्पनीले जनाएको छ ।
प्रोडिजिट ट्याव्लेट ।
प्रोडिजिट नेपालले तिन प्रकारका ट्याव्लेट पिसी वजारमा ल्याएको छ । टी १०, टी ०३ र यु १७ जिटी नाम रहेको यो पिसीको मुल्य क्रमस २१ हजार, १६ हजार र ३१ हजार रुपैयाँ पर्ने कम्पनीले जनाएको छ । एन्ड्रोइड २ दशमलव ३ अपरेटिङ सिस्टम रहेको यी ट्यावहरुमा १ दशमलव २ गिगाहर्ज प्रोसेसर र ५१२ एमबी ¥याम रहेको छ । आठ जिठी ईन्टरनल मेमोरी रहेको यो ट्यावलेटमा थ्रिजी,वाईफाई,म्युजिक भिडियो, लगायत राम्रो व्याट्री क्षमता रहेको कम्पनीले जनाएको छ ।
मोमो र आई ट्यावलेट ।
नेपाली बजारमा भित्रिएका सस्ता ट्यावहरुको सुचिमा मोमो र आई ट्याव्लेट पनी पर्दछ । लोटस ग्लोबल ईन्टरनेशनल प्रालिले दुईथरीका मामो नाईन र आई ट्याव्लेट पिसी ल्याएको हो । यी ट्याव्लेटको मुल्य १४ हजार ९ सय ९९ रुपैयाँ र १० हजार ९ सय ९९ रुपैयाँ पर्ने कम्पनीले जनाएको छ । आठ ईन्चको स्क्रिन रहेको यो ट्याव्लेट पिसीमा तिनवटासम्म फिल्म सपोर्ट गर्ने क्षमता रहेको साथै १ दशमलव ५ जिविको प्रोसेसर, आठ जिविको ईन्टरनल मेमोरी र ३२ जिविसम्म एक्सटरनल मेमारी सपोर्ट गर्ने लगायतका सुविधा रहेको कम्पनीको दावी छ ।
भर्ब ट्याव्लेट ।
सिटीभी नेपालले भर्ब ट्याव्लेट पिसी नेपाली बजारमा भित्राएको छ । यसको अधिकतम मुल्य २२ हजार ७ सय ६९ रुपैयाँ र विद्यार्थीको लागी १९ हजार ९ ९९ रुपैयाँ पर्ने कम्पनीले जनाएको छ । ७ ईन्चको यो एन्ड्रोईड पिसीमा वाईफाई, फोन,थ्रीजी, एचडी भिडियो कल तथा गेमीङको सुविधा रहेको छ । राम्रो ब्याट्री क्षमता रहेको यो ट्याब्लोईडले साधारण अवस्थामा ४८ घन्टा र लगातार प्रयोग गर्दा ६ घन्टासम्म ब्याट्री ब्याकअप दिने कम्पनीले जानकारी दिएको छ । यो पीसीमा ५ सय १२ मेगाबाईट ¥याम छ भने ईन्टरनल ८ देखी एक्पान्डेबल ३२ गेगाबाईट क्षमतासम्मको मेमोरी राख्न मिल्छ । हङकङमा निर्मित यस मोबाईलको वारेन्टी १ बर्ष रहेको कम्पनीले जनाएको छ ।
ड्रासिसको ट्याव्लेट ।
ड्रासिस टेक्नोलोजी एण्ड अटोमेशनले ट्याव्लेट पिसी बजारमा ल्याएको छ । एन्ड्रेइड ४ दशमलव ० अमरेटिङ सिस्टम रहेको यो ट्याव्लेट पिसीमा १ दशमलव ५ गिगाहर्जको सिपीयु,वाईफाई,क्यामरा, टच स्क्रिन, ५१२ ¥याम स्पिड रहेको कम्पनीले जनाएको छ । ४ जिवीको स्टोरेज क्षमता रहेको यो ट्याव्लेटको मुल्य १७ हजार १ सय पर्ने कम्पनीले जनाएको छ ।
मीतासी बिई १०० ट्याव्लेट ।
७ इन्चको मितासी बिई १०० एन्ड्रोइड ट्याव्लेट पिसीमा ४ दशमलव ० अपरेटिङ सिस्टम रहेको मितासीले जनाउको छ । कोर्टेक्स बोक्सपिच ए १०, १० गिगाहर्ज प्रोसेसर रहेको यसमा ५१२ एमबी ¥याम रहेको छ । ४ जिविसम्मको क्षमता रहेको यो ट्याव्लेटमा १६ जिविसम्म एक्सटरनल मेमोरी र ६ घण्टासम्म व्याकअप,अडियो,भिडियो लगायतको सुविधा रहेको कम्पनीले जनाएको छ ।
ग्लोबल ट्याबलेट ।
शंकर समूहअन्र्तगतको एसजी ग्लोबल प्रालिले ग्लोवल ट्यावलेट पिसी वजारमा ल्याएको छ । यसको बजार मूल्य रु ९ हजार ९ सय ९९ तोकिएको कम्पनीले जनाएको छ । वाईफाई ,भिडियो कलिङ ,जिपिआरएस ,ई बुक रिडर लगायतको सुविधायुक्त यो ट्याबलेट पिसी ७ इन्चको टचस्किृन रहेको छ । एण्ड्रोईड २ दशमलव ३ अपरेटिंग सिस्टम रहेको यसमा रेडियो, एसएमएस तथा सिमकार्ड राखेर चलाउन सकिने कम्पनीले जनाएको छ । यसमा वाइफाई, जिपिआरस् तथा गेमहरु चलाउन सकिनेछ ।
सामसुङ ग्यालेक्सी ट्याव्लेट ।
८ दशमलव ९ ईन्चको सामसुङ ग्यालेक्सी ट्याव्लेट अन्य ट्याव्लेटको तुलनामा धेरै महगो र स्तरिय रहेको छ । १ गिगाहर्जको ड्युलकोर प्रोसेसर रहेको छ भने टिएफटी टचस्त्रिनका साथै वाईफाईको सुविधा रहेको छ । एन्ड्रोईड होनीकोम्ब ३ दशमलव १ अपरेटिङ सिस्टम रहेको छ । सात हजार एमएएच व्याट्री क्षमता रहेको यो ट्यावको नेपाली मुल्य पचाँस हजार रहेको कम्पनीले जनाएको छ । केहि समयअघि मात्रै सामसुङले ट्याव्लेट पिसी ७३०० मोडेलको ग्यालेक्सी ट्व्यालेट पनी वजारमा ल्याएको छ । डुअल कोर १ गिगाहर्ज प्रोसेसर रहेको यो ट्यावमा ६ हजार एमएएच व्याट्री क्षमता रहेको र नेपाली वजारमा यसकोमुल्य ५९ हजार ३ सय पर्ने कम्पनीले जनाएको छ ।
प्रोलिकं र फुजिथु ट्याव्लेट ।
एसएचटिसी ईन्टरनेशनलले नेपाली बजारमा प्रोलिकं र फुजिथु ट्याव्लेट ल्याएको हो । चाईनामा वनेको प्रोलिकंको मुल्य ५१ हजार रहेको छ भने जापानमा वनेको फुजिथुको मुल्य १ लाख ३२ हजार रुपैयाँ पर्ने कम्पनीले जनाएको छ । यी ट्याव भने विन्डो वेसमा आधातिर भएर चल्ने ट्याव्लेट हो । प्रोलिकंमा १ जिविको ¥याम ३२ जिविसको हाडडिस्क,४ घण्टा व्याट्री व्याकअप रहेको छ भने फुजिथुमा ६२ जिविको ईन्टरनल हार्डडिस्क, २ जिविको ¥याम स्पिड, ९ घण्टा व्याट्री व्याकअप र दुवै पिसीको १ वर्ष बारेण्टी रहेको कम्पनीले जनाएको छ । यी ट्यावमा कम्प्युटरका सम्पुर्ण काम गर्न सकिने कम्पनीले जनाएको छ ।
नेपाली उखानै छ सस्तो वेसाएको पच्दैन, तर यो भनाई नेपालमा ट्याव्लेट किन्नेहरुको लागी भने लागु भएको देखिदैन । नेपालमा जतिपनी ट्याव्लेट विक्रि भईरहेका छन् सस्ताले नै अधिपत्य जमाईरहेका छन् । स्मार्ट फोनकै मुल्यमा ट्याव्लेट पिसी पाईने भएपछि उपभोक्ताको आकर्षण वढेको हो । न्युन आर्थिक अवस्था भएकालाई सस्ता ट्याव्लेट उपयोगी हुने भएकाले त्यसप्रती रुची जानु स्वभाविक भएको युवा प्लस ट्याव्लेट विक्रि गरिरहेको नेपाल डिष्ट्रीव्युसन आईएनसीका राजमान महर्जन वताउछन् । उनका अनुसार सो ट्याव्लेट दैनिक दुई दर्जनको हाराहारीमा विक्रि भईरहेको छ । चाईनामा उत्पादित प्रोलिकं र जापानमा उत्पादित फुजिथु ट्याव्लेट नेपाली बजारमा महंगोमा पर्दछन् । सो ट्याव्लेट विक्रि गर्दै आईरहेको एसएचटिसी ईन्टरनेशनल नेपालका मार्केटिङ म्यानेजर डिबी श्रेष्ठ पनी सस्ता ट्याव्लेटले महगां ट्याव्लेटको विक्रि वितरणलाई कमि ल्याएको स्विर्काछन् । उनि भन्छन् मान्छेलाई सस्ता ट्याव्लेट भएपछि पुग्छ गुणस्तरिय हुन आवश्यक छ कि छैन सो विषयमा ध्यान दिईरहेका छैनन । सामसुङ सभिर्सेज नेपालका स्माटफोन ट्रेनर्र प्रकेश घिमिरे भने सस्ता ट्याव्लेटले स्तरिय ट्याव्लेटको बजार गिराउन नसक्ने वताउछन् । उनि भन्छन् दिगो भरपर्दोलाई कमसलसगँ तुलना गर्न मिल्दैन । सवै ट्याव्लेटका आ आफ्नै उपभोक्ता छन् । नेपाली बजारमा ट्याव्लेट भित्रिने क्रम वढ्दो छ , आज नयाँ व्राण्ड भनिएको भोली नै पुरानो हुन्छ, जानकारहरु भन्छन् नेपालमा धेरै ट्याव्लेटहरु भित्रिएका छन् जसको नाम ठेगाना नै उल्लेख गरिएको हुदैन । कति प्रकारका ट्याव्लेट नेपाल भित्रिएको छ सो विषयमा यकिन तथ्याकं छैन । हामी नेपालीको आर्थिक अवस्था निम्न नै छ त्यसैले सस्तो किन्नु वाध्यता हो तर धेरै सस्तो भेटियो भनेर किनिहाल्नु पनी हुदैन , राम्ररी वुझेर, के कस्ता फिचरहरु छन् , वारेण्टी ग्यारेण्डी,वितरक कम्पनी आधिकारीक होवा हैन, विग्रिएको खण्डमा कस्ता सुविधा पाउने लगायतका विषयमा राम्रोसगँ वुभझेरमात्र खरिद गर्दा राम्रो हुन्छ ।
१३ भदौ २०६९ मा अन्नपुर्ण पोष्टमा प्रकाशित लेख ।
shankar August 29, 2012 Log in to Reply
tab malai pani chahiyeko thiyo tar khai kun purchase garne ho almal ma6u. bhai santi 1damai ramro lagyo article. it heklp me to solve my confusion.